Ubuntu anotendeuka gumi nemashanu. Nyaya ine nharo | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu anotendeuka gumi nemashanu. Kashoma kuti munhoroondo yese hapana vhezheni yakatumidzwa zita raFelis silvestris catus. Nekuti sekatsi yekumba, Unogona kuida kana kuvenga. Asi, hapana linuxero haina hanya
Yakanga iri Gumiguru 20, 2004 iyo email pane tsamba yekutumira yakazivisa kuwanikwa kweshanduro yekutanga nemazwi aya:
Iwo anodziya-ane moyo warthogs wechikwata cheWarty vanodada nekupa yekutanga vhezheni yeUbuntu
Mune iyo imwechete email, hunhu hwekuparadzira hwakatsanangurwa.
Ubuntu iri mugove mutsva de Linux chiie inounza hukuru hunoshamisa hweDebian nekumisikidza nekukurumidza uye nyore, kuburitswa kwakajairika (mwedzi mitanhatu yega yega), yakasarudzika sarudzo yemapakeji akaisirwa akaiswa nekutadza
uye kuzvipira kugadziridzo dzekuchengetedza nemwedzi gumi nemasere yekutsigirwa kwehunyanzvi kweimwe vhezheni.
Sevhisi yakatangwa zvakare iyo ichave yakakosha mukuzivikanwa kwekuparadzirwa. Ivo vaizokutumira iwe kana mamwe maCD chero kupi zvako pasi rose mahara zvachose. Yakanga iri nguva iyo kwete wese munhu aive neInternet uye avo vaiita vangangodaro vachishandisa yakaganhurirwa kana yakaderera yekumhanyisa data chirongwa.
1 Ubuntu anotendeuka gumi nemashanu. Zvimwe zviitiko munhoroondo yayo
2 Kubatana, muvengi wevanhu
Ubuntu anotendeuka gumi nemashanu. Zvimwe zviitiko munhoroondo yayo
Iyo inotevera vhezheni yakauya muna Kubvumbi 2005 uye yakanzi "Hoary Hedgehog." Iyi vhezheni yakafumiswa uye yakavandudzwa nemhinduro dzemushandisi pawebhusaiti.
Isu taifanira kumirira kusvika 2006 kuti zviitiko zviviri zvakakosha zviitike: Iyo yekutanga vhezheni yerutsigiro rwakawedzerwa inoonekwa uye ndinova mushandisi weLinux.
Shanduro 6.06, yakadomwa zita rekuti "Dapper Drake" ndiyo yekutanga kuburitswa kweUbuntu kwenguva refu. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, iyo yakawedzera rutsigiro vhezheni vane makore matatu ekutsigira iwo desktop desktop; Y makore mashanu ekutsigirwa neshanduro shanduro. Zvinoenderana nehunyanzvi hweprojekiti, idzi shanduro dzinoenderera dzichisununguka.
Kunze kwekuseka pamusoro, kwekufunga kusvika kwangu kuUbuntu chiitiko chakakosha, rega ndimborangarira ruzivo rwangu. Dapper Drake yaive yangu yechitatu Linux kugovera mumazuva matatu. Sekuziva kusaziva kwakaitika kwandiri kuenda kubva paWindows kuenda kuLinux pasina chiyero. Ini fomati dhisiki uye kurodha padiki Debian mufananidzo. Kuisa kwakundikana.
Mune kahawa yecyber ndakatsvaga imwe nzira ndikadzika pasi Knoppix. Ndiine Knoppix mune live mode, ini ndakapisa Ubuntu cd kuti ndikwanise kuisa yangu yekutanga Linux distro.
Ubuntu panguva iyoyo zvaive nyore kupfuura mamwe ma distros, asi zvaive zvisiri nyore. Mazhinji mawebhusaiti akashandisa Flash, kana ActiveX kana ivo havana kukurega uchifamba neFirefox. Kunyangwe paive pasina zvekushambadzira masevhisi panguva iyoyo, zvinotaurwa naPablinux ko nezveDisney +, zvakaitika kwatiri nechikamu chakanaka chemasaiti.
Sezvo kuwiriranwa kweOpenOffice nemafomu ekudyidzana neMicrosoft kwaive kwakashata, nzvimbo dzekuchengetera dzaisanganisira vataridzi vemagwaro dzakagadzirwa neMicrosoft yaimhanya pasi peWine.
Nditendere ini nguva yemutero kuna Automatix. Ichi chishandiso, chakamhurwa nemahara software purists, Izvo zvakaita kuti zvive nyore kune vashandisi kuisa multimedia codecs, Adobe's Flash player, uye imwe software yekudyara.
Kubatana, muvengi wevanhu
Nhoroondo yeUbuntu yakanga izere nemakakatanwa. Zvichida chikuru chakakonzerwa nekubatana.
Na2010, iyo indasitiri yeIT akatanga kufunga kupfuura makomputa. Haisi kungoti mafoni aive akangwara, asi materevhizheni uye zvimwe zvishandiso semidziyo yemumba yaive zvakare.
Ongorora: Mumashoko ekutanga endima yacho yakati 2016. Ndatenda kumuverengi Pietre nekuona iko kukanganisa.
Kuti usangane nedambudziko iri, mujaho wekubatana wakatanga. Canonical yakatanga zvirongwa zviviri; Mir uye Kubatana.
Mir yaive graphic server iyo yaizotsiva inoremekedzwa X11 nekwaniso yekugadzirisa iyo kuratidza zvichienderana nekuti mudziyo wacho yakashanda yakazvimiririra kana yakabatana necomputer kana keyboard. Kubatana kwakarongwa senge desktop yakachinjika iyo yaibvumidza kuwana kune zvemukati zvemukati kubva pane desktop desktop. Kuburikidza nevanhu vazhinji vanobhadhara Canonical, iyo kambani iri kumashure kweUbuntu, yaida kugadzira foni / komputa hybrid, asi haina kuwana mari inodiwa.
Mune mawonero angu, yekutanga vhezheni yeUbatanidzwa yakanga yakanaka. Asi kubva payakatangwa muUbuntu 12.04 yanga ichirasikirwa nemashandiro. Vagadziri vacho vanobheja zvese pane vhezheni isina kumbobvira yaita muviri uye iyo nhasi inoenderera se chirongwa chemunharaunda yakazvimirira.
Asi, apo kuyedza kweCanonical kwekupinda mumusika wefoni (nevatengesi vechitatu-vezvinhu) nematerevhizheni zvakundikana, misika yemakambani yakanga yatanga kuve inobatsira. Canonical's technical rutsigiro yaive yakachipa zvakanyanya pane Red Hat's, uye yavo mhinduro yegore yaive akaenzana zvakaenzana.. Izvo zvakare zvakawana kupinza kwakanaka pakati penzvimbo yeInternet yezvinhu indasitiri.
Ye2018, Ubuntu yakaburitsazve vhezheni neGnome sedhiraivhu remuchadenga, uye vagadziri veMir vari kutsvaga kuisanganisa muWayland, imwe graphical server iyo inoda kutsiva X11.
Chinhu chega chasara, parizvino, cheiyo inopandukira uye ine hunyanzvi Canonical isina kusiya munhu asina hanya, ndiwo mapakeji eSnap. Asi ndiani anoziva kwenguva yakareba sei. Iyo internet mamioneire uyo akatora zororo kunzvimbo yemuchadenga ave kuswedera kumakumi mashanu ake. Uye kambani yako ichaenda kuruzhinji chero nguva.
Kufanana nevanhu, makambani ane nguva yekukura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ubuntu anotendeuka gumi nemashanu. Ipfupi nhoroondo yezvinonyanya kukakavara pane zvakagoverwa
Makandiita kuti ndirangarire kufamba kwangu kwakadzika uye kupamhama asi sekukanganisa pakutanga kwangu ne linux kupfuura zvazvaive ne ubuntu, pakuverenga automatix, chimwe chinhu mumusoro mangu chakati kune ichi ndinomuziva asi ini handizive kuti, tsvaga uye wikipedia Ini ndapedza kurangarira kuti nguva idzodzo, ini ndichine CD rekutanga randakapihwa neshamwari, yaive imwe yekutanga shanduro. Ndinozvisiya kure kana ndawana iyo desktop inonzi kubatana, ndakaedza kuyedza nekubuntu asi nekuda kwezvimwe zvikonzero kumhanya kwangu mu linux kwakamira, asi isu tichiri kufanira kuziva kuti ubuntu idistro iyo yakabatsira linux kusvika kuvanhu vazhinji